နျူးကလီးယား ပဋိပက္ခ တားဆီးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အင်အားကြီး ၅ နိုင်ငံသဘောတူ
မှတ်တမ်းရုပ်ပုံ- အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ် Vandenberg လေတပ် အခြေစိုက် စခန်းကနေ လက်နက်မဲ့ တိုက်ချင်းပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် စမ်းသပ်မှု။ အောက်တိုဘာလ ၂၊ ၂၀၁၉။ ဓာတ်ပုံ- Staff Sgt. J.T. Armstrong/U.S. Air Force via AP
နျူးကလီးယား ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ဖို့အတွက် နျူးကလီးယား လက်နှက်တွေနောက်ထပ် မပြန့်ပွားဆောင်အတူတကွပူးပေါင်းတာဆီးဖို့ လုံခြုံရေးကောင်စီဝင် ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး ၅ နိုင်ငံက သဘောတူလိုက်ကြောင်း တနင်္လာနေ့မှာ ပူးတွဲကြေငြာချက်တစောင်ထုတ် ပြန်လိုက်ပါတယ်။
နျူးကလီးယား လက်နက်တွေ နောက်ထပ်မပြန့်ပွားအောင် တားဆီးရမယ်လို့အခိုင် အမာယုံကြည်ကြောင်း ကြီး ၅ ကြီးဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ရုရှား၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန် နဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့က ပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
နျူးကလီးယား စစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရတယ်ဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီစစ်ပွဲမျိုးဘယ်တော့မှ မတိုက်ခိုက်ရဘူးလို့ အခိုင်အမာယုံကြည်တယ်လို့လည်း ဒီနိုင်ငံကြီးတွေက ဖေါ်ပြထား ပါတယ်။
ယူကရိန်းနယ်စပ်မှာရုရှားစစ်တပ်တွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ချထားတဲ့အတွက် ရုရှားနဲ့ အနောက် နိုင်ငံတွေကြား တင်းမာမှုနဲ့၊ တရုတ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု၊ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ပြင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်အရေး စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုနဲ့ တရုတ်တို့အကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာဘဲ ဒီကြေညာချက်ထွက် ပေါ်လာတာပါ။
အနာဂတ်မှာ နျူးကလီးယား လက်နက်တွေကို အပြည့်အ၀ ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုတဲ့ စာချုပ်ပါ အဓိကအချက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ကိုလည်း ၅ နိုင်ငံစလုံးက သဘောတူကြ တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီသဘောတူညီချက်ဟာ ၂၀၁၅ သေဘာတူညီချက်အတွက် အီရန်နဲ့ နျူးကလီးယား ကိစ္စတွေပြန်လည် စတင်ဆွေးနွေးနေချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နြူးကလီးယား ပဋိပက်ခ တားဆီးရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ အငျအားကွီး ၅ နိုငျငံသဘောတူ
နြူးကလီးယား ပဋိပက်ခတှမေဖွဈဖို့အတှကျ နြူးကလီးယား လကျနှကျတှနေောကျထပျ မပွနျ့ပှားဆောငျအတူတကှပူးပေါငျးတာဆီးဖို့ လုံခွုံရေးကောငျစီဝငျ ကမ်ဘာ့အငျအားကွီး ၅ နိုငျငံက သဘောတူလိုကျကွောငျး တနင်ျလာနမှေ့ာ ပူးတှဲကွငွောခကျြတစောငျထုတျ ပွနျလိုကျပါတယျ။
နြူးကလီးယား လကျနကျတှေ နောကျထပျမပွနျ့ပှားအောငျ တားဆီးရမယျလို့အခိုငျ အမာယုံကွညျကွောငျး ကွီး ၅ ကွီးဖွဈတဲ့ တရုတျ၊ ရုရှား၊ ပွငျသဈ၊ ဗွိတိနျ နဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုတို့က ပူးတှဲကွညောခကျြထဲမှာဖျေါပွထားပါတယျ။
နြူးကလီးယား စဈပှဲမှာ အနိုငျရတယျဆိုတာရှိမှာမဟုတျပါဘူး၊ ဒီစဈပှဲမြိုးဘယျတော့မှ မတိုကျခိုကျရဘူးလို့ အခိုငျအမာယုံကွညျတယျလို့လညျး ဒီနိုငျငံကွီးတှကေ ဖျေါပွထား ပါတယျ။
ယူကရိနျးနယျစပျမှာရုရှားစဈတပျတှေ အလုံးအရငျးနဲ့ ခထြားတဲ့အတှကျ ရုရှားနဲ့ အနောကျ နိုငျငံတှကွေား တငျးမာမှုနဲ့၊ တရုတျရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖေါကျမှု၊ တောငျတရုတျ ပငျလယျပွငျနဲ့ ထိုငျဝမျအရေး စတာတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး အမရေိကနျပွညျ ထောငျစုနဲ့ တရုတျတို့အကွား သဘောထား ကှဲလှဲမှုတှေ ဖွဈပျေါနခြေိနျမှာဘဲ ဒီကွညောခကျြထှကျ ပျေါလာတာပါ။
အနာဂတျမှာ နြူးကလီးယား လကျနကျတှကေို အပွညျ့အ၀ ဖကျြသိမျးတဲ့အထိ လုပျဆောငျဖို့ ဆိုတဲ့ စာခြုပျပါ အဓိကအခကျြကို အကောငျအထညျဖျေါဖို့ကိုလညျး ၅ နိုငျငံစလုံးက သဘောတူကွ တယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဒီသဘောတူညီခကျြဟာ ၂၀၁၅ သဘောတူညီခကျြအတှကျ အီရနျနဲ့ နြူးကလီးယား ကိစ်စတှပွေနျလညျ စတငျဆှေးနှေးနခြေိနျမှာ ထှကျပျေါလာ တာလညျးဖွဈပါတယျ။
အီရန် နျူးကလီးယား အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြန်လည်စတင်
NATO အရှေ့ဘက် ချဲ့ထွင်မှုမရပ်လျှင် ရုရှားစစ်ရေးအရ တုံ့ပြန်မည်
မြောက်ကိုရီးယား နျူကလီးယားလက်နက် ကိစ္စ ကန်၊ ဂျပန် နဲ့ တောင်ကိုရီးယားတို့ ဆွေးနွေး